FAQs - Dongguan Pretty Shiny Zvipo Co., Ltd.
Ini ndiri mutsva kune zvetsika zvipo. Ndotangira papi?
Iwe inogona kutanga nekuendesa chikumbiro chemahara chitauro kuburikidza newebhusaiti yedu, kana email isu zvakananga uye kutaurirana nesu izvo zvinhu, saizi, huwandu uye chero magadzirirwo mazano kune ako akagadzirwa zvinhu.
Ndeipi yako yepasi odha?
Mune Zvakawanda, imwe ndeyedu shoma asi inodhura, saka kazhinji vanhu vanoenda ne100pcs pane dhizaini.
Zvidimbu zvemutengo uye MOQ zvinoshanduka nezvinhu zvakasiyana.
Zvakawanda sei zvigadzirwa zvako?
Isu tiri kunyanya kupa chipo chakagadzirwa chipo & maprimiyamu, pane mashoma akavhurika dhizaini kusarudza kubva uye hapana masheya kana pamusoro pezvinhu zvekumhanya zviri kutengeswa. Mitengo yacho ichasiyana kubva dhizaini, saizi, ruvara, kupedzisa uye huwandu, ndapota inzwa wakasununguka kubata nesu kuburikidza sales@sjjgifts.com; sjjgifts@gmail.com.
Ndingaisa sei odha yangu?
Paunenge uchinge wapa kubvumidzwa kwakanyorwa nezveyako dhizaini iwe unogona kuisa odha yako kuburikidza neemail.
Ini ndichave ndinokwanisa kuona kuti izvo zvangu zvakagadziriswa zvipo zvichaita senge isati yagadzirwa?
Ehe. Isu tinopa izere-yakajeka dhijitari mifananidzo yekutendera kwako. Uku kuseka-sanganisira kusanganisa kweanogadzira izvo zvinhu zvako zvakarairwa zvingaite senge nekuparara kwemavara anoshandiswa mukugadzira kwako.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti nditore zvinhu zvangu?
Kubva panguva yekubvumidzwa kwemifananidzo, unogona kutarisira kuona zvako wega zvipo mukati memazuva gumi nemana kusvika gumi nemasere.
Mhepo / Gungwa nhumbi, FedEx / UPS / DHL